Alahady 19 Aprily 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino"
“ Dia nanokatra ny sain'ireo Izy hahalala ny Soratra Masina...” Lioka 24:44-49
Mbola mandia ity volana Aprily ity isika mpianakavin’ny finoana ankehitriny ary ity no alahady manaraka ny fankalazantsika ny PASKA izay nanehoana fa velona ny Tompo ary nandresy ny fahafatesana Izy. Isaorantsika ny Tompo fa miasa amin’ny fomba maro Izy ka tsy mahasakana ny fiombonam-po amam-panahintsika, hiombom-bavaka ny fisarahan-toerana sy tsy fahafahana mivavaka any amin’ny trano Fiangonana, noho izao toe-javatra lalovan’ny Firenena ankehitriny izao. Mbola ny Lohahevitra hoe : “VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO” no mbanjinintsika ankehitriny.
Ity alahady ity ihany koa no alahadin’ny sampana DORKASY ka hiombonantsika amam-panahy amin’izany sampana izany.Araka izay voalaza tetsy ambony dia fanompoam-pivavahana hampitaina amin’ny alalan’ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra no nampiasaina ka izany dia azontsika arahina ao anatin’ny pejin’ny facebook ‘ ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena.Ny mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika ny fanompoam-pivavahana . Ny mpitandrina RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy, izay manao ny fizaran’asany eto amin’ny fitandremana kosa, no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny litorjia faharoa fampiasa eto amin’ny sahan’ny FJKM no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao. Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny tenin’ny Soratra Masina araka izay hita ao amin’ny SALAMO faha 44 and. 4-8 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “ Hianao dia Hianao no Mpanjakako, Andriamanitra ô; Mandidia famonjena ho an’i Jakoba. Hianao no hanosehanay ny fahavalonay; ny anaranao no hanitsahanay izay mitsangana hamely anay. Fa tsy ny tsipikako no itokiako, ary ny sabatro tsy hahavonjy ahy. Fa namonjy anay tamin’ny fahavalonay Hianao, ary ny nankahala anay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva; ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay.” Amen !
Ny hira FFPM 142 and. 1, 2 “Tafatsangana tokoa” no niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo tamin’ny fanombohana izao fanompoana masina izao.
Izao no vavaka fiderana sady fihaiken-keloka nataon’ny Fiangonana :
“Ry Tompo Andrimanitray o! Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo Ianao.Maharim-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Indreto izahay ! Midera sy manome Voninahitra ny Anaranao, ary mankalaza Anao, noho ny tombon’andro izay natolotrao anay , fa na dia eo aza izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao, mbola ao anatin’ny fihoboana an-trano ny mpianakavin’ny finoana dia nomenao tombon’andro, velona tra-mpamonjena ka afaka miara-miombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao. Tompo o! Isaoranay Anao izay rehetra nitondranao ny fihainanay. Isaoranay Anao, ny fitehirizanao anay tsy ho isan’izay lasa nodimandry ka mampalahelo ny fiarahamonina fa nomenao tombon’andro hiaraka hanome Voninahitra Anao . Na izany aza anefa Tompo o! Dia tsaroanay ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay, izay hitalahoanay Aminao fatratratra, ary anehoanay ny fihaikenay ny helokay eo anatrehanao, ka hifonanay eo amin’izay rehetra vitanay ka tsy mifanaraka amin’ny sitraponao. Tompo o! Aza mamela ny fahadisoanay aharitra eo anatrehanao ary aza manisa ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay fa zovy moa izahay no afaka hifandahatra Aminao?. Izany indrindra no ahatsiarovanay fa Andriamanitra tsy miova Ianao, omaly sy anio ary mandrakizay fa ny fo torotoro sy ny fanahy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinontsinona . Izany famindramponao izany Tompo o! No hanantenanay fa hamela heloka Ianao, eny!, mamela heloka isanandro Ianao, ilay Tompo Andriamanitra ivavahanay. Raiso ny vavakay mba handraisanay ny famindramponao, iainanay sy ivelomanay amin’izay tombonandro mbola omenao anay . Misaotra Tompo Amen!”,
Natanterahana ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady i Zoky Mahaly. Nanao vavaka izy aloha ka nisaotra ny Tompo noho ny fotoana nomeny. Nangataka taminy ny hanokafany ny fon’ny Fiangonana mba handraisana ny hafatra.
Ny hafatra dia nalaina araka ny bokin’ny Matio 5: 14 “Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao”. Nisy ny tantara kely namehezana ny hafatra izay mitantara ny fiainan’ny ankohonana misy an’i Koto efa-mianaka. I Koto, ilay malaina indrindra amin’ny fankanesana any am-piangonana, nefa rehefa nahita ilay jiro iray tao am-piangonana izay tsy nirehitra izy, fa ny jiro hafa kosa , samy nirehitra tsara avokoa dia nody ny sainy ka noheveriny fa manambara ny momba azy mihitsy io jiro iray tsy nirehitra io. Taorian’izany dia nibebaka izy ka lasa nazoto nanompo ny Tompo .
Izao ary no hafatra: Mba hampirehitra ny jirontsika dia mila mibebaka isika; Mandray an’i Jesoa ao am-po amin’ny fiainantsika mandrakariva. Fa rehefa mirehitra kosa ny jirontsika dia ireto no vokany : mazava ny tenantsika , mamirapiratra ka mizara hazavana ho an’ny hafa. Teo am-pamaranana dia natao ny Hira faha 480 and. 3 “Aoka ny foko sy ny sainao”.
Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia nisy ny hira natolotry ny Sampana Tanora Kristiana ho fandraisana anjara ao anatin’izao fanompoam-pivavahana izao.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nitari-bavaka Ratoa RAHARINTSALAMA Hanta , mpikambana ao amin’ny Dorkasy ary izy ihany no namaky manontolo ny perikopa izay voalahatra hovakiana amin’ity fotoana ity.Ireto no perikopa androany : Daniela 12 : 1-3 / Lioka 24:44-49 / Asa 2:29-36
Ny hira FF 5 and. 1,2 “Izaho no fananganana ny maty” no natolotra ho hiraintsika fiangonana isan-tokantrano sy ankohonana mialoha ny hafatry ny toriteny.
Ny mpitandrina RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy, no nitory ny tenin’Andriamanitra. Rehefa avy nanolotra fiarahabana sy ny fahasoavan’ny Tompo ho an’ny Fiangonana izy dia nitaona ny fiangonana mba hanokatra ny filazantsara araka ny Lioka 24:44-49 fa izany rahateo no hitondrana ny hafatra.
Mandia ny herinandro manaraka ny fankalazantsika ny Paska isika ankehitriny. Paska izay nandresen’i Jesoa Kristy ny fahafatesana. Ny toriteny anio dia miompana indrindra amin’ny fampianarana farany nataon’ny Tompo , mialoha ny nampiakarana Azy any an-danitra. Ny lohahevitra hojerena ary dia ny hoe : “ NY VAVOLOMBELONA MARINA, NAHITA NY FITSANGANAN’NY TOMPO”. Hisy zanakevitra telo no ndeha hojerena araka izany:
1-	IREO IZAY NOSOKAFAN’I KRISTY NY SAINY, HAHALALA NY SORATRA MASINA. (and. 45)
Ny fanokafana ny saina dia asan’Andriamanitra feno . Eo amin’izay sakana mety tsy ahafahantsika mahatakatra ny Soratra Masina dia Izy Kristy mihitsy no manala izany. Eto ny Tompo dia toy ny manome fahefana ireo mpianatra mba ahatakarany izay voambaran’ny Soratra Masina dia izay voambara momba an’i Kristy(and. 46-47).
Ahoana ny hoe: “Mahalala ny Soratra Masina” ? Isika eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena izao, dia efa nampianarina ka mahalala ny momba ny Tendry Mialoha Roa Sosona na ny “double prédestination” . Araka izany, na samy mamaky ny Soratra Masina aza dia misy ny mahalala fa misy kosa tsy mba nahalala toa ireo fariseo sy ny Mpanora-dalàna izay namaky mandrakariva ny Soratra Masina nefa tsy nahalala akory ny momba an’i Jesoa Kristy.
Ny mahalala dia tsy mijanona fotsiny amin’ny fahaizana ilay andinin-tsoratra masina fa:
Mahazo tsara izay tondroin’ny Soratra Masina dia i Jesoa Kristy
Hendry ka manaraka izay voalazan’ny Soratra Masina
Mametraka ho laharam-pahamehana ao amin’ny fiainany, izay voalazan’ny Soratra Masina.
Ho antsika Fiangonana Reformé dia mametraka mandrakariva ny hoe SOLA SCRIPTURA sy ny hoe TOTA SCRIPTURA izay midika fa ny Soratra Masina irery ihany ary ny Soratra Masina Manontolo no hifotoran’ny fampianarana sy ny foto-pinoana.
Ho fampiharana dia aoka isika hiaina ny fahalalana tsara ny Soratra Masina, Tsy ho voavilivilin’ny fampianarana samihafa ary amin’izany dia hamirapiratra tahaka ny kintana isika .
2-	IREO IZAY MITORY AN’I KRISTY AMIN’NY ALALAN’NY FIBEBAHANA SY NY FAMELAN-KELOKA (and. 47)
Ny hoe mitory amin’ny anaran’i Kristy dia miteny na manambara zavatra amin’ny anaran’i Kristy. Misolo-tena an’i Kristy ka miteny amin’ny Anarany.Ny vontoantin’ny hafatra amin’izany dia ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Manome dika vaovao ny asa fitoriana i Kristy eto. Raha mamaky ny Lioka 4: 18-19 (Isaia 61:1,2) dia Fitoriana ny Fibebahana sy ny Famelan-keloka amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no hataon’ny Mpianatra.Ny fanatanterahana izany dia mandalo ary tsy maintsy miainga eo amin’i Jesoa Kristy ny asa atao amin’ny Fitoriana Fibebahana sy famelan-keloka.
Ho fampiharaha :Ny Fibebahana sy ny famelankeloka izany dia atao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy ihany.
3-	IREO MITAFY HERY AVY AMIN’NY AVO INDRINDRA
Ny hoe mitafy Hery dia rakofan’ny Fanahy Masina ka tsy ny olona intsony no miasa fa ilay Fanahy Masina mandrakotra ny olona no miasa feno eo aminy , hiasa ho an’Andriamanitra. Tsy misy asa azo atao ho an’Andriamanitra izany raha tsy voatafin’ny Fanahy Masina isika. Andriamanitra no manome ny Fanahy Masina ho an’ny Mpianatra. Ny fanomezana ilay Hery na ny Fanahy Masina dia asan’Andriamanitra feno. Tsy hery kely izany fa ny Hery faratampony mihitsy no omena ny Fiangonana.
Marina ary ny filazana fa ny vavolombelona marina mahita ny fitsangana’ny Tompo dia ireo mitafy hery avy amin’ny avo indrindra. Ny Fanahy Masina izay miasa ao anatin’ny olona no manosika azy hiasa ho an’Andriamanitra.
Raha fintinina ary dia Asan’ny Fanahy Masina no mahatonga antsika hisokatra ka hahalala ny soratra masina ka ahafantarantsika an’i Kristy. Ny Fanahy masina no mahatonga antsika hampibebaka sy hibebaka sy hamela heloka sy hampamela heloka ny hafa.Ny Fanahy Masina no hery ahafahantsika manao ny asan’Andriamanitra.
Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra. Amen!
Taorian’ny toriteny dia nanolotra ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ny hira mitondra ny lohateny hoe : “Eh! Haleloia Deraiko” ary avy eo dia nanao ny vavaka noho ny tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.
Izao no vontoatin’izany :“ Ry Tompo Andriamanitray o! Isaoranay ianao fa Andriamanitra tia dia tia anay tokoa. Ny fitiavanao dia mialoha isanandro ny fitiavanay Anao. Faly izahay fa na dia mijanona aty an-trano aza dia afaka mandre ny teninao. Isaoranay Ianao amin’ny fampianarana atolotrao.Nampahafantarinao anay fa misy hafatra izay tianao hampitaina ho an’ny olona izay nosokafanao ny sainy mba ahalala ny soratra masina ary tsapanay fa miantraika mivantana aminay izany. Ho an’ireo izay mitory amin’ny anaranao Jesoa Kristy, ny fibebahana sy ny famelan-keloka, dia manentana anay mba hitsangana sy ahatontosa ny asanao izany. Ho an’ireo izay mitafy ny hery avy any amin’ny avo indrindra dia manampy anay izany, ahanananay toky sy fanantenana fa tokony ho tanterakay ny hafatrao sy ny iraka ampanaovinao ny Fiangonana. Indreto izahay faly sy ravo, ka mametraka eo am-pelatananao ny ahatontosanay izany hafatrao izany entanay mamakivaky ity herinandro vaovao ity. Meteza hiasa ao anatinay, noho ny herin’ny fanahinao masina mba hijoroanay vavolombelon’ny fitsangananao tamin’ny maty fa efa nadresy Ianao ary ny fandresenao dia efa natolotrao ho an’izay rehetra mino Anao. Amin’ny anaranao Jesoa izay velona no sady lohan’ny Fiangonana no anaovanay ny vavakay . Amen!”
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nanatanteraka izany ka hafatra no nambarany fa rehefa mivoa ny fiangonana aorian’izao fihoboana izao dia hisy ny Fiarahan’ny Fiangonana , mandray ny Fanasan’ny Tompo.
Ho fifampaherezana dia noraisina ny filazantsara araka ny Lioka 8: 39 : “Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran’ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’i Jesosy taminy.”
Amin’izao fotoana hijanonana an-trano izao dia aoka isika hiezaka hifampizara amin’ny ao an-trano ny zavadehibe nataon’ny Tompo tamintsika.Rehefa afaka mandeha amin’izay kosa isika dia torio any ivelany izany.
Mialoha ny nanatanterahana izany dia natao ny hira 146 and. 1 “Anao ny dera ry Zanaky ny Ray”.
Izao no famintinana izany vavaka izany : “Misaotra ny Tompo noho ny fanomanana sy ny fahatanterahan’izao fanompoam-pivavahana izao. Raiso Tompo ny vavaka asandratray. Ho voky ny zava-tsoa avy amin’ny teninao anie izahay, ho an’ny olona rehetra ary ho an’ny olona manontolo. Mitondra am-bavaka ny mpitondra fiangonana rehetra. Mivavaka ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana mba ho voaharo amin’ny areti-mandoza. Mivavaka ho an’ny asan’Andriamanitra izay tanterahin’ny Fiangonana. Misy mantsy ireo asa izay tsy tontosa na voadingana noho izao toejavatra mihatra izao. Mivavaka ho an’ny Firenena sy ny ambaratongam-mpitondra rehetra, ka mba ho voafehy ny aretina. Mivavaka ho an’ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana, ireo sahirana, ny marary sy ny mana-manjo. Izany vavaka izany dia apetraka eo aminao Tompo ary hatambatray amin’ilay vavaka nampianarinao.” Amen
Taorian’ny vavaka fangatahana dia natao ny fanekem-pinoana Apostolika izay iraisantsika amin’ny Fiangonana manerana izao tontolo izao. Natao ny hira FFPM 141 :1,4 “Efa resy izao na dia ny fasana aza”. Natao ny famakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FF 41 “Jesoa no mpanavotra” Izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny trinité masina.
Soratra : Tovohery Rabako – Sary sy feo : Rova Harentsoa – Seta Rajaofetra –